Famonoana tany Rwanda : Nanao hetsika fahatsiarovana ny teto Madagasikara -
AccueilSongandinaFamonoana tany Rwanda : Nanao hetsika fahatsiarovana ny teto Madagasikara
Famonoana tany Rwanda : Nanao hetsika fahatsiarovana ny teto Madagasikara
21/04/2018 admintriatra Songandina 0
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy (MAE), ny hetsika fahatsiarovana ny famonoana tany Rwanda. Fahatsirovana faha-24 amin’ity taona ity izany. Ny Fikambanamben’ireo teratany rwandais monina sy mipetraka eto Madagasikara miaraka amin’ny Firenena Mikambana (ONU) sy ny MAE no nanatanteraka izany.
Araka izany, dia tonga nanome voninahitra ny fotoana ny solontenan’ny ONU,Violette Kakyomya, miaraka amin’ireo masoivoho vahiny maro miasa sy monina eto Madagasikara, ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka, ny minisitry ny Fitsarana, Elise Rasolo Alexendrine, sy ireo olona marobe teratany rwandais sy malagasy.
Natomboka tamin’ny fandehetana labozia niraisana izany narahin’ny iray minitra fahanginana nanomezam-boninahitra ireo namoy ny ainy tamin’izany famonoana tany Rwanda izany, ny taona 1994. Nisy ihany koa ny fampisehoana horonantsarimihetsika mirakitra ny tantara nahatonga ny famonoana ny Tutsis tany Rwanda, izay noho ny fanavakavaham-bolon-koditra sy fahasamihafana fiaviana ary tsy fitoviana fisainana no niandohany.
Nambaran’ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka tamin’izany àry fa miondrika am-panajana ny firenena malagasy mahatsiaro manoloana ireny zava-doza namonoana ny samy mpiray tanindrazana tany amin’ny firenena rwandais, ny taona 1994. “Miondrika isika, noho izany. Manome lanja ary midera ny fahaizan’ny vahoaka rwandais isika nampiakatra avo ny firahalahiana. Nametraka ambony ny fihavanana, ka nampitoviana ny fomba fisainana tao anatin’ny fahasamihafana”, hoy ny minisitra.
Notsidrian’ny minisitra hatrany fa anjaran’ny tsirairay ny maka lesona, indrindra ny eto Madagasikara. “Ny olombelona dia manaja ny olombelona hafa, na inona na inona tsy fitoviana. Ny fifanajana amin’ny maha samy malagasy no tokony hapetraka, ny fanajana ny demokrasia, sns, izany no ahafahantsika mametraka ny fandriam-pahalemana maharitra, izay tsy maintsy harovantsika mba tsy hiverenan’ny tranga fifamonoana”, hoy ny minisitra Henry Rabary-Njaka.
Fanalana ny pgcm : Azon’ny mpanatanteraka atao tsara
Nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo no nisy ny didim-panjakana manaisotra ny filohan’ ny fitsarana an-tampony Ranary Robertson Rakotonavalona amin’ ny toerany, io izay fahefan’ ny mpanatanteraka tanteraka. Mazava tokoa ny voalazan’ ny lalàna ...Tohiny
Filoha Hery Rajaonarimampianina : « Tsy misy tany lasan’ny vahiny raha mandray andraikitra isika »
Filoham-pirenena mivady : Nankasitrahana ireo toeram-pitsaboana mendrika